‘डिसेम्बर फल्स’मा आर्यनसंग उपासना अनुबन्धित, के जम्ला त् जोडी ? - www.dthreeonline.com
‘डिसेम्बर फल्स’मा आर्यनसंग उपासना अनुबन्धित, के जम्ला त् जोडी ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २०, २०७७ समय: १२:४४:२८
काठमाडौं,१७ मंसिर । निर्माणाधिन फिल्म ‘डिसेम्बर फल्स’ को हिरोइनमा उपासना सिंह ठकुरी अनुबन्धित भएकी छिन् । केही समयअघि एक कार्यक्रमका बीच निर्माण घोषणा गरिएको फिल्ममा आर्यन सिग्देल मुख्य भूमिकामा छन्। त्यतिबेला निर्माण पक्षले स्क्रिप्टको मागअनुसारको हिरोइनको खोजी जारी रहेको बताएको थियो । अन्तत: मंगलबार ‘डिसेम्बर फल्स’ मा उपासना भित्रिएकी हुन् ।